Kuwedzera kwekuchenjerera nekuda kwehugandanga: US inofambisa Advisory yekuTunisia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Kuwedzera kwekuchenjerera nekuda kwehugandanga: US inofambisa Advisory yekuTunisia
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Tunisia Kupwanya Nhau • USA Kuputsa Nhau
Dhipatimendi reHurumende reUS rakaburitsa Chikamu chechipiri Chekufambisa Advisory (Exercise Yakawedzera Chenjedzo) yeTunisia Yambiro iyi yakapihwa nekuda kwenjodzi yekuwedzera kwekurwiswa nemagandanga kune vekunze nekunyika zvinangwa munyika. Kurwiswa kwemagandanga kwakambonanga hurumende yeTunisia nemauto ekuchengetedza uye nzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi.
Vagari vemuUS vanofamba muTunisia vanorayirwa:
Kudzidzira kwakawedzera kungwarira muTunisia nekuda kwehugandanga. Dzimwe nzvimbo dzawedzera njodzi.
• Mukati me30 km yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweTunisia pamwe nemuganhu neLibya nekuda kwehugandanga.
• Nzvimbo dzine makomo kumadokero kwenyika, kusanganisira Chaambi Mountain National Park nzvimbo, nekuda kwehugandanga.
• Gwenga kumaodzanyemba kweRemada nekuda kwenzvimbo yemauto.
• Jendouba kumaodzanyemba kweAin Drahem uye kumadokero kweRN15, El Kef, neKasserine, padhuze nemuganhu weAlgeria nekuda kwehugandanga.
• Sidi Bou Zid iri pakati peTunisia nekuda kwehugandanga.
Mapoka emagandanga anoenderera mberi achironga kurwisa kunogona kuitika muTunisia. Magandanga anogona kurwisa pasina kana yambiro, achinanga nzvimbo dzevashanyi, nzvimbo dzekufambisa, mamuseum, nzvimbo dzekutandarira, mahotera, mitambo, makirabhu ehusiku, maresitorendi, nzvimbo dzezvitendero, misika / zvitoro, zvivakwa zvehurumende nemauto ekuchengetedza. Nyika yepasi rose yekukurumidzira, iyo inopa masimba ekuchengetedza masimba mazhinji ekuchengetedza runyararo uye inoita kuti hurumende itarise mukurwisa hugandanga, iri kuita.
Hurumende yeUS ine hushoma kugona kupa rubatsiro rwekukurumidzira kuvagari vekuUS mune dzimwe nzvimbo dzeTunisia. Vashandi vehurumende yeUS vanofanirwa kuwana mvumo chaiyo yekufamba kunze kweTunis yakakura
Kana iwe ukafunga kuenda kuTunisia:
• Chenjera paunenge uchishandisa zvifambiso zveruzhinji, nekuda kwekuchengetedzeka uye kunetsekana.
• Dzivisa kuratidzira uye kuungana kwevanhu.
Tarisa nhepfenyuro yemuno kuputsa zviitiko uye gadzirira kugadzirisa zvirongwa zvako.
• Ngwarira mukana wekubiwa.
• Dzivisa kugara husiku kunze kwemaguta makuru nenzvimbo dzevashanyi.
• Wana inishuwarenzi yezvokurapa yakakwana inosanganisira kubviswa pakurapwa.
Nyoresa mu Smart Traveler Kunyoresa Chirongwa (STEP) kuti ugamuchire maAlerts uye kuti zvive nyore kukuwana iwe mune emergency.
• Tevedza Dhipatimendi reHurumende paFacebookuye Twitter.
Wongorora Ongororo yeUtsotsi uye Chengetedzo kuTunisia.
• Vagari vekuUS vanoenda kunze kwenyika vanofanirwa kugara vaine hurongwa hwezviitiko zve emergency. Dzokorora Rwendo rweMufambi.
Zvakaitika muLibya zvinoramba zvichikanganisa mamiriro ekuchengetedza pamuganhu weTunisian neLibya munzvimbo dzakaita seRas Jedir neDehiba pamwe nemaguta eBen Guerdan neMedenine. Muganhu neLibhiya unowanzovharwa kumatraffic ese aine chiziviso chipfupi kwenguva yakareba. Dhipatimendi reHurumende rinopa zano vagari vemuUS kuti varege kuenda kuLibya.
Western Makomo uye Chaambi Mountain National Park
Magandanga mapoka anoramba achishanda mumakomo eWestern Tunisia.
Denga reSouth reRemada
Denga rezasi kweRemada rakasarudzwa senzvimbo yeuto neHurumende yeTunisia. Mvumo yakakosha inodikanwa kune vafambi vanoshuvira kupinda munzvimbo yeuto.
Jendouba El Kef naKasserine padhuze neAlgeria Border
Magandanga mapoka anoramba achishanda munzvimbo idzi.
Sidi Bou Zid muCentral Tunisia
Magandanga mapoka anoramba achishanda munzvimbo ino.